भरतपुरको मेयरमा कसले मार्ला बाजी: कसको शक्ति कति ? यस्तो छ पछिल्लो हिसाबकिताब • raradiodarpan.com
भरतपुरको मेयरमा कसले मार्ला बाजी: कसको शक्ति कति ? यस्तो छ पछिल्लो हिसाबकिताब
भरतपुर महानगरपालिका यसपटक पनि स्थानीय चुनावको इपिसेन्टरमा छ । चुनावी माहोल देशैभरि फैलिए पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावको चर्चा सबैभन्दा उच्च छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभा सांसद रहिसकेका विजय सुवेदीलाई मेयरको उम्मेदवारका रुपमा मैदानमा उतारेको छ । अर्कोतिर माओवादीलाई भरतपुरको नेतृत्व दिने निर्णयमा असन्तुष्ट कांग्रेसको एक समूहले पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेको छ ।
भरतपुरको नेतृत्व लिन यसपटक १६ जना मैदानमा भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा यी नै तीन जनाबीच हुने प्रस्ट छ ।
यही कारण ताजा अवस्थामा भरतपुरमा कांग्रेसका १३, एमालेका ८, नेकपा एसका ५ र माओवादीका ३ वडा अध्यक्ष रहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरमा कूल १ लाख ५० हजार ४७८ मतदाता थिए ।
जसमध्ये १ लाख १२ हजार ८९७ मत खसेको थियो । महानगरका वडाहरुमा दलका उम्मेदवारहरुले पाएको कूल मत हिसाब गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।
यसपटक कांग्रेसले २० वडाको नेतृत्व पाएकाले कांग्रेस मतदाताको मत गठबन्धनमा थपिन सक्ने आँकलन छ । यद्यपि कांग्रेस नेताको स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कारण गठबन्धनको मत प्रतिबद्ध रहनेमा शंका छ ।
गठबन्धनको पक्षमा रहेका कांग्रेस र माओवादी नेताहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारले २० हजारसम्म मत काटे पनि नतिजा आफ्नै पक्षमा हुने दावी गर्छन् ।